Android egwuregwu na-aghọ nnọọ ewu ewu n'etiti ndị mmadụ ugbu a. Na ọtụtụ android egwuregwu idei mmiri ahịa, ị nwere ike mfe inwe mgbagwoju anya nke na otu onye ịhọrọ. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-achọ hack egwuregwu mgbe ahụ ị ga-obi ụtọ ịhụ ka nke a ndepụta hack egwuregwu na-akpan kwadebere maka hack egwuregwu ndị hụrụ si n'akụkụ nile nke ụwa. Otú ibudata egwuregwu ndị a na si na ngwa ahịa na-amalite na-akpọ!
1.Contract egbu egbu: sinipa
Nkwekọrịta egbu egbu dị ewu N'ọgbụgba égbè egwuregwu. Nke a android egwuregwu nwere ọtụtụ na-akpali akpali atụmatụ ebe ị na-egwu ọrụ nke a nkwekọrịta egbu egbu. Ị nwere ike ịhọrọ gị nkwekọrịta na ngwá agha. Ndịna-emeputa nke egwuregwu bụ nnọọ ezi ihe na ụda mmetụta ahapụ dịghị nkume unturned inye egwuregwu a a ezi uche obi na-adị. Nke a android egwuregwu bụ nnọọ free nke na-eri na ị nwere ike mfe ibudata ya si Google Play ụlọ ahịa.
Ihe kacha na-agba ọsọ egwuregwu, nchọgharị ụzọ ụgbọ oloko bụ otu nke kasị mma android egwuregwu dị na ahịa ugbu a. Egwuregwu nwere ọtụtụ wepụtara na i nwere na-agba ọsọ site nsogbu akara karịa ihe. Ị nwere ike ijikọ egwuregwu na gị ịkparịta ụka n'Ịntanet na profaịlụ ma na-agba ndị enyi gị ma ọ bụ aka ha.
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya edinam, mgbe ahụ, Hungry Shark Evolution bụ ihe kasị mma android egwuregwu maka gị! Na-adị ndụ na egwuregwu, ị ga-eri ihe niile na-akawanye na ụzọ gị. The atọ akụkụ ndịna-emeputa, dịgasị iche iche nke umu azu shark na ezi uche nsonaazụ ụda enyere na-eke nke zuru okè gburugburu ebe obibi. I nwekwara ike jikọọ gị egwuregwu na gị ịkparịta ụka n'Ịntanet profaịlụ.
Iwe Gran Run bụ android egwuregwu na-anwale gị na-agba ọsọ nkà. Otú nnọọ ị pụrụ na-agba ọsọ na-enweghị nkwụsị? Egwuregwu a kwụnyeere ihe na-akpali ibé ebe a Nne nne e ekpochi pụọ na mgbapu. Otú ọ dị na Nne nne ụjọ na nke a bụ ebe na-agba ọsọ ule amalite. Ị bụ free na-agba ọsọ n'okporo ámá nke New York na kụrie ihe niile na-akawanye na ụzọ gị. Ihe kacha na-agba ọsọ egwuregwu, ị ga-adịghị anya ga-esi riri ahụ a free android egwuregwu.
Adala Mbà gị ibe n'ibe na ndị niile na ohere na nke a Bouncy Bits android egwuregwu. Ka ị na-Ọkwa elu na egwuregwu, ị na-aga inyocha a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ dị na egwuregwu. E nwere ọnụ ọgụgụ nke odide na ị nwere ike ịnakọta ego na bonuses ofụri egwuregwu. Nke a android egwuregwu bụ nnọọ free nke na-eri.
Nanị ụzọ na-adị ndụ na egwuregwu a bụ na-awụlikwa elu ọbụna elu! Ị nwere ịzọpụta jellies site na-eme ha na-awụlikwa elu elu. Ị nwere ike ijikọ egwuregwu na gị ịkparịta ụka n'Ịntanet profaịlụ na aka ndị enyi gị ka ha sonyere gị na nke a fun egwuregwu.
7.Sky Force Agha
Sky Force Agha bụ gosiri dị ka onye nke kasị mma android ọgụ egwuregwu ke ngwa ahịa. Ihe mgbaru ọsọ nke egwuregwu bụ iti iro gị iji ihe ndị kasị elu ngwá agha dị. Nke a bụ a kpochapụwo edinam juru n'ọnụ egwuregwu na otutu ighikota. Ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na nke a edinam egwuregwu bụ kpam kpam free. Ya mere ihe niile ị chọrọ ime bụ download egwuregwu a na wụnye ya na ekwentị gị ka malitere ngwa ngwa!
Na Korean odide na pụrụ iche psy agba egwú Nkea, Crossy Road aghọwo otu n'ime ndị kasị fun egwuregwu ke play ụlọ ahịa. I nwekwara ike ịzụrụ psy agwa site na na-ngwa zụọ. Ị nwere ike ọ bụghị naanị-egwu egwuregwu a na gị android smart ekwentị, ma egwuregwu kwekọkwara Android TV. Ị nwere ike ịzọpụta gị egwuregwu na Google Play ụlọ ahịa, weghachi ọganihu na jikọọ na gị mmadụ profaịlụ na egwuregwu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ezi N'ọgbụgba égbè egwuregwu, mgbe ahụ, GunFinger nwere ike-ezi nhọrọ maka gị! Egwuregwu a bụ kpam kpam free nke na-eri na ị nwere ike mfe ibudata ya si Google Play ụlọ ahịa. E nwere ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ na egwuregwu na ọ bụrụ na ị na-a mgbe ọkpụkpọ mgbe ahụ ị ga-ahụ n'anya nke kwa ụbọchị nsogbu awa.
N'ihi na ndị mmadụ na-n'anya ụgbọala racing egwuregwu, Asphalt 8 bụ ihe ọ bụla na-erughị otu ngọzi maka ha. Ndị ka elu ndịna-emeputa na nsonaazụ ụda tinyere n'elu ugbo ala-eme ka egwuregwu uru na-akpọ.